Abavelisi befilimu ejongene neplywood kunye neplywood entle- Roc
IIMPAWU ZEFILIMU EJONGENE NEFILIMU
I-OSB (IBHODI YENKQUBO YOKUFUNDA)
Imveliso yethu yazo zonke iintlobo zepaneli yeenkuni yi-1,000,000m3 ngonyaka ngamnye. Ukuzibophelela ukuvelisa nokuthumela iimveliso ezisemgangathweni ophezulu kwifilimu ejongene neplywood, iplywood efanelekileyo, i-plywood ye-antiskid, i-MDF, i-OSB kunye neemveliso ze-LVL.
Njengomenzi ophambili kunye nomthengisi weplywood, i-MDF, i-OSB kunye ne-LVL, sizibophelele ekubeni siphambili kubuchwephesha kunye nomgangatho. ngokuqhubekayo ukuphucula zonke iindawo lenjongo yethu iinkuni. Unikezelo lwethu oluzinzileyo lukunceda ufumane isikhundla esomeleleyo kwimarike yamanye amazwe kwaye iqinisekisa ukukhula kwexesha elide.
Ukuthumela ngaphandle kude kube iDtae
Sikhuphele ukuthunyelwa kwelinye ilizwe
ABENZI BEZIXHOBO ZOKWAKHIWA KWEENDLELA KUNYE NOOMATSHINI
Apha ngezantsi kukho IZIBONELELO onokuyonwabela…
Ukuthenga ngokugqwesileyo kunye nesebe lolawulo lomgangatho, kwaye ke, umthengisi oqeqeshiweyo. Ke i-ROCPLEX inokuzithemba ngokwaneleyo ukuba ibe lisebe lakho elithembekileyo lokuthenga phesheya. Iminyaka engama-25 yeshishini losapho elikhuni masibe nokuzithemba kokwenza umsebenzi olungileyo ekwakheni imveliso yearhente yokuthenga.
I-ROC International, Inkampani ethembekileyo yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle, inamava engama-25 yamava kwinkonzo yokungenisa nokuthumela kwelinye ilizwe. I-ROC ingcali yamazwe aphesheya kwimveliso yeenkuni, ngakumbi kwishishini leplanga leenkuni. Iminyaka engama-25 yephaneli yokuvelisa kunye nokuthumela kwelinye ilizwe kulinywe iqela lobungcali kwimveliso yeemithi yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle kunye nokuhlolwa komgangatho.
Udidi lweshishini lokungenisa kunye nokuthumela kwelinye ilizwe kumasiko, ngesantya esigqwesileyo sokukhutshwa kwamasiko kunye nokukwazi, ukuzinza kunye neqela lokusebenza eliqolileyo, ukubonelela ngenkonzo yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle kunye nokucinga.
egubungela iindawo zeshishini lase China.